Olole lagu doonayo inay xilka isaga dagto Sylvi Listhaug oo si weyn uga socda internetka - NorSom News
Olole lagu doonayo inay xilka isaga dagto Sylvi Listhaug oo si weyn uga socda internetka
Olole looga soo horjeedo isla markaana lagu codsanayo in ay xilka isaga dagto wasiirka soo galootiga iyo isdhexgalka bulshada ee Sylvi Listhaug ayaa mudooyinkii ugu danbeeyay ka socday internetka. Koox isku magacowday Nordic refugee rights acitivists oo sheegay inay ka shaqeeyaan xuquuqda dadka qoxootiga ah ayaa ololahan ka bilaabay internetka ayaga oo uruurinaya internetka ka aruurinayo saxiixa dadka. Kooxdana ayaa sheegtay in ay Sylvi ay wado siyaasad ka dhan ah qoxootiga oo aan la jaanqaadi karin xiligan hada lagu jiro. Waxay intaas ku dareen in Syvlie aysan laheyn awood iyo rabitaan ay ku hesho xal maareyn kara howlaha soo galootiga iyo isdhexgalka bulshada, ayna isku badashay wasiirka kala sooca dadka. Waxay kalee wadaa been abuur iyo cabsi galin ku saabsan qoxootiga si ay dadka Norwey ku dhaqan uga dhigto kuwa arxan-laawayaal ah , iyada oo garab mayso dhamaan xeerarka caalamiga ah ee qoxootiga.
Halkan ka akhriso warkan iyo aruurinta saxiixa kooxda:
Previous articleIlmo lix bilood jira oo soomaali ah oo maydkiisa laga helay bada Talyaaniga
Next article195 qof oo 14 kamid ah ay soomaali tahay oo Norwey iska soo dhiibay bishii hore ee